Tank'omby FRP, Fiberglass Shell, GRP Tank - Jrain
MISAOTRA ANAO ZAVATRA INDRINDRA
Ireo fiara mifono vy sy fanaka, anisan'izany ny singa fanampiny, dia azo atao endrika na endriny rehetra, manaporofo ny fahafaha-mitoetra miaraka amin'ny composite FRP. Mampiasa ny haitao ara-teknolojia, manana hery manamboatra fiara mifono vy sy sambo izahay araka ny fepetra takian'ny mpanjifa ao amin'ny zavamaniry avy eo ary ampandehanana soa aman-tsara any amin'ny tranokalanao izy ireo. Ho an'ireo fiara mifono habe lehibe kokoa, manana ny toetra tsy manam-paharoa isika amin'ny fananganana eo an-toerana amin'ny toerana voafaritrao, ary ny diame farany farany ...
Ny fiara mifono vy matevina dia afaka amboarina sy vokarina amin'ny endrika samy hafa, habe, loko, matevina, fepetra serivisy ilaina, insultoj, conductivities, sns .. Ireo indostria samy hafa mampiasa tanky misy sakamalaho fibre ho an'ny rafi-bolan'izy ireo: 1. Fangaro mifangaro, mpametaka, mpanasa sy ny maro hafa. ho an'ny angovo nokleary sy indostrian'ny fitrandrahana sy ny harena ankibon'ny tany. Manamboatra ny mpanjifa marindrano ho an'ny tetikasa maro. Ho an'ny tetikasa samihafa, voafantina maro samihafa no voafantina hifanaraka amin'ny toe-javatra misy serivisy. Dif ...
Ny baoboba Fiberglass dia be mpitia amin'ny fitahirizana rano, ny fikarakarana rano, ny rafitra FGD, ny fanodinana simika ary ny fanaraha-maso ny fandotoana, ny fanadiovana entona, ny fifehezana ny fandefasana gazy, indrindra ny entona fandotoana, ny fako sy ny fitrandrahana herinaratra. Satria: raha oharina amin'ny vokatra vita amin'ny vy na vita amin'ny vy, ny plastika fanamafisana Fiberglass (FRP) dia manana tombony maro. Ny FRP dia maivana mahery, matanjaka ary azo alain-tahaka amin'ny diamensaly marobe, izay misy fi ...
Ny clarifier Fiberglass sy ny settler dia maivana kokoa noho ny akora nentim-paharazana nentim-paharazana, ary manampy anao hahita ny mety indrindra miaraka sy manangona ny antsipiriany ankoatra ny vokatra. Ny Jrain dia manome fiara mifono vy miforitra sy klarifier, mpiavy, tohatra rano, tafiotra na firakotra, fanangonana sy effluent (laundra) ho an'ny rano, ny loto, ny fitrandrahana ary ny fampiharana indostrialy hafa. Ny endrika miafina amin'ireo fizarana ireo dia mitondra ny savoka mankany anaty lavaka fanamainana. Mandritra ny fiverenan'ny fiverenana dia ireo faritra vita amin'ny volon-dehilahy ao amin'ny faritra ...
Ny fonony Fiberglass dia ampiasaina betsaka amin'ny fikarakarana rano sy ny fanodinana rano, simika sy solika, sakafo, fivarotana, sns. Ny rakotra Fiberglass dia tsy mitovy amin'ny loko sy ny endriny toy ny boribory, halavam-borona, arisety, trano fisaka, sns. Ny firakotra Fiberglass dia natao hatrany mba hanomezana mari-pana ny halavam-panafody, ny fivoaran'ny ivelany ivelany dia mahatohitra ny fepetra masiaka amin'ny tontolo iainana, mahatonga ny fiberglass ho fitaovana ilaina hampitaina ireo singa, anisan'izany ny masoandro, s ...
Fitterglass fittings dia matetika vita amin'ny hand-up dingana, misy votoaty resin avo. Ny endrika samihafa dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny bobongolo. Ny volon-koditra samihafa dia azo soloina amin'ny fepetra isam-paritra sy serivisy samihafa. Izay fangatahana manokana momba ny habeny sy ny endriny dia azo alaina amin'ny fangatahana. Fitterglass fittings dia malaza satria nasehony: • Hery lehibe mifandraika amin'ny lanja • Ny insulation elektrika sy thermaly • Tohitra amin'ny haintany sy ny simika • Mifanohitra amin'ny fitaomana ...
Ny takelaka famafazana dia novolavolaina amin'ny ampahany iray ary manasongadina fandehanana an-tongotra tsy matotra. Ny takelaka mahomby momba ny vidiny dia mamela ny fanapahana mahomby amin'ny tranokala hanamaivana ny fako sy ny entona mitondra entana any amin'ireo lalana roa ireo dia mamela ny fampiasana tsy misy tohana mitohy. Ny fikosoham-borona vita amin'ny fibre vita amin'ny jrain dia maivana kokoa noho ny lanjan'ny metaly sy ny votoaty avo dia manome fanoherana tsara sy mila fikolokoloana kely. Tranon-tsarimihetsika avo lenta kokoa no tratrarina ...
Ny fantsom-bolojika dia misy fantsona fibre vita amin'ny fantsom-borona, fantsona fantsom-borona, fantsom-bistika, fantsona laminate roa (miaraka amin'ny PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, sns) ary ny sisa amin'ny fananganana rindrina fantsona fiberglass dia misy lay telo: 1．Liner: mamaritra ny fanoherana mahomby indrindra amin'ny antonony. 2. Rafitra strastika: manome tanjaka mekanika avo sy fanoherana ny vesatra. 3. Ny akanjo ambony: miaro ny rafitra fantsona amin'ny toetr'andro, ny fitrandrahana simika ary ny taratra UV. Izy ireo dia malaza ao amin'ny indostrian'ny maro be ...
Jrain FRP, izay hita ao amin'ny Hengshui City of China, dia mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra composite. Nanamboatra vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika (FRP) maro be izahay nanomboka tamin'ny taona 2008 ary mbola mavitrika amin'ny fanatsarana ny vokatra, ny dingana ary ny fampandrosoana ny tsena. Mandraka ankehitriny dia manana atrikasa 5000m2 izahay, miaraka amin'ny milina fanamafisana, fitaovana ary banga, sns. Izahay dia manamarina miaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001. Nahazo labana mifandraika sy fitaovana fanandramana FRP matihanina koa izahay. Mahafantatra ireo kaody iraisam-pirenena mifandraika betsaka isika ary avy eo manamboatra ireo vokatra mifototra aminy toa ny ASME, ASTM, BS EN.
VAOVAO FARANY MORA MOMBA NY JRAINANY
Sinochem International sy Shanghai Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd. (Shanghai Chemical Institute) niara-nanangana ny "Sinochem - Shanghai Chemical Institute Composite Materials joint laboratorium" ao amin'ny Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park. Ity no importan iray hafa ...
Ny mpikaroka shinoa dia mamolavola aerogel nanofotika karbonatana mahery vaika mahery vaika
Nahazo aingam-panahy ny fahamailinana sy ny hamafin'ny tranokala an-tranon-jaza voajanahary, ekipa mpikaroka notarihan'i Prof. YU Shuhong avy ao amin'ny University of Science and Technology of China (USTC) hamolavola fomba tsotra sy ankapobeny hamolavola ireo aerogel karbonika mahery vaika sy havizanana miaraka amin'ny nanofibrous ...
AOC Aliancys dia nanambara fa: AOC Aliancys (Nanjing, China) dia nanomboka namokatra résoleur AOC araka ny fombafomba nafarana avy amin'ny foibe any Etazonia. Ny antonta rehetra momba ny vokatra vaovao dia mahafeno ny fepetra ilaina, izany hoe ny vokatra andian-dahatsoratra amerikan'i AOC Aliancys izay niantsona tao. Shina amin'ny fomba ofisialy ...
Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP, Famolavola grating, hamolavola, Nohavaozina Fiberglass, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass,